Eedeysanayaasha Weerar ka dhacay Muqdisho oo la xakumay
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, ayaa maanta go'aan ka gaartey kiiska saddex eedeysane oo loo hayay weerar ka dhacday sanadkii tagey magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Maxkamadda, Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Farxaan Maxamed Samatar, Cabdi naasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buule lagu helay dembigii lagu soo ogey, sidaasi darteedna lagu xukumay dil toogasho ah.
Shuute ayaa sheegay in Saddexda eedeysane ay kahor qirteen Maxkamadda inay qeyb ka qaateen weerarkii Hotel Naasa hablood Labo oo dhacay 28-kii October, 2017, kaasi oo lagu dilay dad badan oo uu kamid ahaa Wasiirkii arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed, Allah ha u naxariistee Madoobe Nuunow Maxamed.
Maxkamadda ayaa sheegtay in Cidii aan ku qanacsaneyn xukunka uu u furan yahay Racfaan.
Waxaa lasoo bandhigay sawirada saddex dhalinyarada ah ee la xukumay, qoryo AK-47 ah iyo bambooyinka gacanta oo Gudoomiyaha Maxkamadda uu sheegay inay wateen xilliga ay Ciidamada amaanka gacanta kusoo dhigayeen.
Israsaaseyn dhexmartay eedaysaniyaasha iyo Ciidamada dowaldda ayaa sababtay dhaawaca mid ka mida raggan halka labada kale ay ku carareen guri ka ag dhawaa Hotel-ka, sidaasna lagu soo qabtey, sida Maxkamaddu ay sheegtay.
Al-Shabaab wali kama aysan hadlin xukunka lagu riday saddexda dagaalame ee la sheegay inay iyadu katirsanaayeen, waxaana xukunkan uu kusoo beegmayaa xilli magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen dilal qorsheysan iyo qaraxyo.